Items filtered by date: Friday, 10 February 2017	Subscribe to this RSS feed
Friday, 10 February 2017 22:22	Wixineen labsii dargaggootaaf carraa hojii banu ragga'e	Manni Maree Bakka Bu'oota Ummataa walga'ii idilee 16fa bara 2fa Kibxata darbe gaggeesseen wixinee labsii dargaggoota biyyattiif carraa hojii banu erga sakatta'ee booda sagalee guutuun raggaasise. Kaayyoonsaa inni guddaanis dargaggootaaf carraa hojii uumuutiin dinagdee biyyattii fooyyessuu yoo ta'u, kana fiixaan baasuufis maallaqni biliyoona 10 akka ramadamu murteeffamuunsaa ibsameera.
Gargaaraan Waajjira Ministeera Muummee Obbo Amanu'eel Abrahaa walga'ii kanarratti argamuun barbaachisummaa labsichaa mana marichaaf ibsa taasisaniin, biyyattiin imaammatawwan, karoorawwan tarsiimawaafi paakeejiiwwan hundagaleessa ta'an qopheessuutiin fayyadamummaa hawaasa maraa mirkaneessuuf tattaaffii hedduu taasisaa turteetti; ammas gochuurratti argamti. Dinagdee biyyaa keessattis maniiwwan qabamanii jiran galmaan gahuuf hirmaannaan dargaggootaa kallattiidhumaan murteessaa ta'uusaa Obbo Amanu'eel ibsanii, mootummaanis sadarkaa hundatti kana dhugoomsuuf haala itti fufiinsa qabuun galiisaanii guddisuuf sochii gochaa tureera jedhu.
Haa ta'u malee, guutummaa biyyattiitti fayyadamummaan dargaggootaa hangi tokko mirkanaa'uunsaa akkuma jirutti ta'ee fedhiin jiru daran dabalaa deemuufi gufuuwwan duraan turan furamuu dhabuunsaanii itti quufinsa dargaggootaa haalaan fiduu akka hindandeenye Obbo Amanu'eel mana marichaaf ibsaniiru. Mootummaan kanuma hubachuun guutummaa biyyattii keessatti dargaggoonni gurmaa'anii haala itti galii dinagdeesaanii fooyyessuu danda'an mijeessuuf tattaaffii gochaa jiraachuusaa Obbo Amanu'eel eeranii, kunis humna omishtummaa isaanii sirnaan fayyadamuun rakkoolee hawaas-dinagdeesaanii akka furatan tumsa jedhaniiru.
Haaluma walfakkaatuun miseensonni mana marichaa tokko tokkos labsichi akka fooyya'uuf yaada kaasaniin, labsiin dargaggoota bayyanachiisuuf bahe kun qaamolee garagaraan hogganamuurra boordiitiin buluutu irraa eegama jedhaniyyuu mormii malee wixineen labsii dargaggootaaf carraa hojii banuuf dhiyaate labsii 995/2009 ta'ee hojiirra akka oolu raggaasifameera. Gama kanaanis maallaqni ramadame sirnaan hojiirra akka ooluufi qaamoleen itti gaafatamummaan kennameefii kutannoon hojiitti hiikuu akka qabanis ibsanii, duulli carraa hojii uumuu magaalaafi baadiyyaatti ittifufuu akka qabus hubachiisaniiru.
Bifuma walfakkaatuun wixineewwan labsii misooma dinagdee biyyattii deggaruuf waliigaltee Baankii Misooma Afrikaafi Chaayinaatiin ji'a Amajjii keessa raawwataman ja'a dhiyaachuun guyyuma kana raggaasifamaniiru.
Read more...	Friday, 10 February 2017 22:19	Buqqaatonni pirojektii Arjoo Dhidheessaa rakkoo	hamaatiin dararamaa jiru
Aadde Fooziyaa Amiin
Misoomni tokko gaggeeffamuuf wayita yaadamu dursa mariin hawaasa hirmaachisaa ta’e gaggeeffamuun erga irratti waliigalameen booda haaldureewwan jiraattota naannawichaaf barbaachisoo ta’an guutamuu malu. Akkasumas, beenyaan barbaachisaafi madaalawaa ta’e buqqaatota qe’ee isaanii lakkisaniif ni taasifama.
Haa ta’uutii misooma warshaa Sukkaaraa Arjoo Dhidheessaatti gaggeeffamaa jiru keessatti wanti qaqqabaa jiru imaammata jiruun kan walfaallessu ta’uu isaarraa kan ka’e balaan uummata naannicharraa buqqa’an mudachaa jiru kan nama gaddisiisu akka ta’e Koreen Abbagaar Ummataa beeksisee jira.
Qonnaan bultoota Ganda Odaa Arbaa lafasaaniirraa buqqa’an 373 qabeenyi isaanii seeraan osoo hinlakkaa'amiin, beenyaan osoo hinkanfalamiiniif akkasumas, lafti bakka bu’insaan osoo isaaniif hinlaatamiin bishaan hidhame ol dacha’uun mana isaanii waan diigeef mana maleeyyii ta’uun dunkaana keessa waggaa lamaaf jiraachaa akka jiraniifi namoonni kuma tokkoofi 600 ol balaa hamaa keessa akka jiran Walittiqabduun Koree Abbagaar Ummataa Aadde Fooziyaa Amiin himuun dhimmichi furmaata hatattamaa barbaada jedhaniiru.
Warshaan misooma sukkaaraaf bakkichatti hundaa'e kun faayidaa ummataa kan hingiddugaleeffanne ta’uusaarraa kan ka’e daa’imman 33 Ganda Odaa Arbaa keessatti dhibeelee daddarboo gargaraaf saaxilamuuniifi nyaata madaalamaa dhabuun akka du’aniif sababa ta’uu Aadde Fooziyaan himanii, dhimmichi qaama dhimmisaa ilaallaturraa deebii hatattamaa kan hinarganne yoo ta’e egereen qonnaan bultoota kanaa gaaffii keessa jiraachuu ibsu.
Jiraattonni yeroo ammaa qe’ee isaaniirraa buqqa’anii mana pilaastikaan ijaarame keessa jiraatan gandoota Naxroo, Cehoo Cuulloofi Baalakee dabalatee qonnaan bultootni 220 lafa bakka bu’iinsaafi beenyaa osoo hinargatiin waggaa lamaaf kan turan yoo ta’u bu’uuraalee misoomaa kan akka buufata fayyaa, bishaan dhugaatii qulqulluu, barnootaafi daandiin kan hinguutamneefii akka ta’e Itti Gaafatamaa Olaanaan Waajjira Abbagaar Ummataa Obbo Qana’aa Sonaa ibsa tibbana waajjirasaaniitti gaazexeessitootaaf kennan irratti dubbataniiru.
Haalichi hammaachuun lubbuu qonnaan bultootaafi maatii irratti balaan qaqqabsiisaa jiru oolee bulee dabalaaa akka jiru Obbo Qana’aan himanii, bishaan jallisiif hidhame guutuun midhaan ooyruurraa akka dhabamsiiseefi naachi achi keessaa yaa’uun namoota afuriifi beeyladoota manaa 64 kan nyaate yoo ta’u qaamni pirojekticha abbummaan gaggeessu xiyyeeffaannoofi quuqama lammiilee kanaaf qabu agarsiisaa akka hinjirredha kan dubbatan.
Misoomni faayidaa ummataaf hindhaabbanneefi fayyadamtummaa jiraattotta naannawichaa hinmirkaneessine misooma osoo hintaane abaarsadha kan jedhan ammoo Oromiyaatti Hogganaan Dhaabbata Abbagaar Ummataa Luba Balaay Mokonnon gamasaaniin, bakka qonnaan bultoonni kun itti qubatanii jiran qaamaan dhaquun daawwannaa gaggeessaniin akka mirkaneessanitti dhalli namaa qe’eesaarrratti irbaata bineensaa ta’uurra darbee dhalliisaafi qabeenyisaa dhibeelee daddarboof saaxilamuufi hanqina bishaaniitiin dararamaa jiraachuu ibsu.
Kanamalees carraan hojii dursaa jirattota naannawicharraa buqqa’aniif osoo hinlaatamiin hafuuniifi ijaarsi misooma kanaa osoo hineegaliin hubannoo hawaasaa uumuu osoo qabanii hojiin akkafeeteedhaan itti seename kun dhumaatii lubbuufi qabeenya hedduuf sababa ta’ee waan jiruuf rakkoon hamaa kanaa olii hawaasa kana gaaga’uu danda’u osoo hindhufiin qaamni dhimmisaa ilaallatu deebii hatattamaafi quubsaa ta’e hawaasaaf kennuun irraa akka eegamu hubachiisu.
Namoota qe’eefi qabeenya isaaniirraa buqqa’anii jiraniifis beenyaan tilmaama sirrii qabeenya isaanii waliin walmadaalu kennamuufii akka qabu akkasumas bu’uuraaleen misoomaa barbaachisoo ta’an kan akka mana jireenyaa, daandii, mana yaalaa, mana barumsaa, riqichaafi kkf guutamuufiin barbaachisaafi kan yeroon itti kennamuu hinqabne akka ta’e Lubni Balaay himanii, carraa hojii uumuu ilaalchisee akkaataa labsiin investimantii kaa'uun fayyadamtummaan buqqaatotaa mirkanaa'uun irra jiraata jedhu.
Read more...	Friday, 10 February 2017 22:15	Namoonni Namootaaf: Dhaabbata jijjiirama dhala namaatiif onnate	Guddina si’ataa waggoota kurnan lamaan darbanirraa eegalee biyyattii keessatti galmaa’aa jiruuf tumsi qaamotni garaa garaa olaanaadha.
Bayyanaa Ibraahimiin	Published in
Read more...	Friday, 10 February 2017 22:09	Dhimmi barsiifatawwan miidhoo ammas xiyyeeffannaa barbaada	Kittaannaan dubartootaaf balaa malee falaa miti
Read more...	Friday, 10 February 2017 20:25	Ijaarsa buufata elektirikii Gannaalee Dawaa	Wiirtuu ijaarsa tajaajila elektirikii Gannaalee Dawaa lakkoofsa sadii
Read more...	Friday, 10 February 2017 20:24	Damee maanufakchariingii tumsuun egeree biyyattii har'a bu'uuressuudha	Damee maanufaakchariingiif mootummaan xiyyeeffannaa kenneen abbootii qabeenyaa amecharratti bobba'aniifi interpiraayizoota maayikiroofi xixiqaan (IMX) gurmaa'aniif deeggarsa addaa gochuun ce'umsa dinagdee qonnarraa gara industiriitti taasifamuuf tumsa akka taasisan deeggarsa gochuurratti argama.
Dabalaa Taaddasaatiin	Published in
Read more...	Friday, 10 February 2017 20:14	“Jechaan osoo hintaane gochaan jijjiirama fidna!”	Jiraattonni hojiirra oolmaa sanadichaatiif kutattummaan akka socho'aniidha kan eeran
Read more...	Friday, 10 February 2017 20:13	Waldaaleen hojii gamtaa misooma dinagdee agroo-indastiriif gumaachaa akka jiran ibsame	Ministirri muummeen wayita egzibiishinicha bananitti
Waldaaleen hojii gamtaa ce'umsa dinagdee agroo-indastiriif gumaacha guddaa taasisaa akka jiran Ministirri Muummeen Mootummaa RFDI ibsan.
Obbo Hayilamaariyaam Dassaalany kaleessa agarsiisaafi baazaarii Waldaalee Hojii Gamtaa wiirtuu Egzibiishinii Finfinneetti eegalamerratti haasawa taasisaniin, baroota darbanirraa kaasee deggarsa mootummaatiin lammiilee hedduun waldaalee hojii gamtaatiin gurmaa'uun jireenya hawaas-dinagdee isaanii fooyyeffataa jiru jedhaniiru.
Waldaaleen kunniin fayyadamummaa miseensotasaanii mirkaneessuu qofaan osoo hindaangeffamiin karaa qindaa'een galii dinagdee hawaasa bal'aa utubuuf shoora bahachaa kan turaniifi dhaabbilee aantummaa ummataa gochaan mul'isaniidha jedhaniiru.
Bu'aan waldaaleen kunneen misooma dinagdee biyyaakeessatti fidaa jiran hawataa waan ta'eef muuxannoo damicharraa argameen caalaatti babal'isuun imala haaromsaa si'eessuu qabna jedhaniiru. Akka biyyaatti hojiilee waldaalee kanneenii bal'inaan sochoosuuf qaamoleen sadarkaa sadarkaan jiran hirmaannaa guddaa taasisuusaanii Obbo Hayilamaariyaam yaadachiisanii, kana caalaatti cimuun dirqama mootummaafi dhimmamtootaa ta'aus eeraniiru. Tooftaalee waldaaleen kunneen itti jabaatan sakatta'uun imaammatoonniifi seeronni fooyya'aa akka jiranis eeraniiru.
Waldaaleen hojii gamtaa qonnaafi sirna gabaa ammayyessuun sirna bittaafi gurgurtaa madaalawaa uumuufi kallattii danda'ame maraan hojmaatasaanii fooyyessuu akka qaban Obbo Hayilamaariyaam ibsaniiru. Omishasaanii hundarratti duudhaa ida'uun gabaa alaatiif dhiyeessuu akka qabanis hubachiisaniiru.
Sagantaan agarsiisaafi baazaarii 4fan Waldaalee Hojii Gamtaa Biyyaalessaa hanga Roobii dhufuutti kan adeemsifamu yoo ta'u, waldaaleen liqiifi qusannoo maallaqaafi yuneenonni 370 hirmaataa jiru.
Takkaalliny Gabayyootiin	Published in
Read more...	Friday, 10 February 2017 19:02	Naamusaan nama waliin jiraatan	Akkuma ummata addunyaa kamuu ummanni Oromoo ummata naamusa, duudhaafi safuu qabuudha. Aadaafi duudhaan ummata kanaa akka galaanaa waraabamee kan hindhumne ta'ullee barreeffama kanaan waa'ee naamusasaa gabaabsinee isin dubbisiifna.
Charinnat Hundeessaatiin	Published in
Read more...	123»End	Page 1 of 3	Suura DhPI	View the embedded image gallery online at:
Lakkooftuu dubbistootaa	Har'a/Today1355Kaleessa/Yesterday1293Torban kana/This_Week2981Torban darbe/This_Month40743Guyyaa mara/All_Days314407	The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.